Hamonjy fivoriamben’ny anglikanina tany Ambanja: mpandeha roa maty tanaty lozam-piarakodia | NewsMada
Par Taratra sur 12/10/2019
Nisesisesy ny lozam-pifamoivoizana tamin’ity herinandro ity. Mazda nitondra mpivavaka hamonjy ny fivoriamben’ny anglikanina no niharan-doza tany Ambanja. Tranga hafa, namoizana ain’olona roa ihany koa no niseho tany Manakara…
Teny Antsakoamaondro, lalam-pirenena fahenina ao Ambanja, ny nahitana loza nahafatesana olona roa raha hihazo an’Ambilobe ny fiara Mazda iray, ny alakamisy teo manodidina ny tamin’ny 10 ora sy sasany. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny zandarimaria ao an-toerana, teo amin’ny 12 kilometatra tsy hiditra an’Ambanja ny niseho ny loza ary namoy ny ainy tamin’izany ny lehilahy 83 taona sy ny vehivavy 42 taona. Nambaran’ny loharanom-baovao fa nitondra mpivavaka hamonjy ny fivoriamben’ny anglikanina ao Ambanja ilay fiara tra-doza. Nifatratra tamin’ny hazo rehefa niala ny arabe ilay fiara. Fantatra koa fa niala mpitondra bisikileta nitondra saribao izy tamin’izany. Fanampin’izany ny fandehanana mafy ka nampifatratra azy teny amin’ny hazo. Araka ny fantatra, manodidina ny roampolo ny mpandeha tamin’io fiara io ary naratra avokoa raha mpandeha tsotra kosa ireo niharam-boina. Taorian’ny loza, nentina tany amin’ny Clinique Saint Damien sy ny hopitalin’Ambanja ireo naratra ary fantatra ankehitriny fa tsy misy atahorana ny ainy.
Mpandeha roa hafa maty tany Manakara
Olona roa ihany koa namoy ny ainy ny alarobia teo vokatry ny lozam-pifamoivoizana teo Mavorano noho ny fandehana mafy nataon’ny fiara Sprinter, nitondra mpizaika FBL na Fikambanam-behivavy loterana, manodidina ny tamin’ny 9 ora teo akaikin’ny tetezana Lapapa. Raha ny angom-baovao, namoy ny ainy teo no ho eo ny zazavavikely tokony ho 4 taona sy ny zazalahikely 6 taona vokatry ny loza raha tsy mbola mahatsiaro tena ny zaza izay fantatra fa 26 volana ary ahina mafy ny ainy, araka ny fanambaran’ny mpitsabo. Raha ny tatitra voaray, miisa 32 ireo naratra mafy, ary zaza amam-behivavy avokoa ny ankamaroany, isan’izany ihany koa ny mpamily ny fiara. Ratra nahazo azy ireo ny amin’ny tanana sy tongotra. Fiara nandalo ny nitondra ireo niharam-boina ao amin’ny Centre Hospitalier de Référence de Manakara, raha ny fanazavana voaray. Fantatra fa mpizaika avy any Ifanadiana ireo niharam-boina ireo ary saika hamonjy ny zaikabe ao Manakara.
Tranga iray ihany hafa koa nanaitra ny mpandeha ny teo amin’ny lalam-pirenena faharoa tamin’ny kamiobe iray nandona fiarakely miisa roa raha hihazo ny aty an-dRenivohitra ireto farany, omaly maraina manodidina ny tamin’ny 8 ora latsaka fahefany. Araka ny loharanom-baovao, nangalatra ny sisiny havanan’ny arabe ity kamiobe ity ka nandona ireo fiarakely roa ireo ary nivadika avy hatrany. Araka ny fantatra, tsy nisy ny aina nafoy tamin’ny loza. Kamiobe iray hafa ihany koa ny nivadika ny zoma iny vokatry ny fitondrana entana mavesatra loatra. Raha ny fantatra, nandeha mafy ity farany, niala lavaka ka nivadika avy hatrany.
Kitra – Fifindran-toerana: hilalao ao amin’ny AS Excelsior i Baggio 26/01/2021
Kitra – «Orange pro league 2021»: mitaraina sy mila vonjy ny ekipan’ny 3FB Toliara 26/01/2021
Indray mijery 26/01/2021
« Tantsoroka –Covid 19 »: afaka nampitaovana ireo mpiasan’ny fahasalamana 26/01/2021
Fanatsarana ny fanabeazana: tokony hilaza ny olana ny mpampianatra 26/01/2021